जीवन बीमा कम्पनी : २१% ले बढ्यो बीमाशुल्क | गृहपृष्ठ
As of 2018-05-24 13:40:02
CHCL 837 (2405) (-4)
GUFLPO 100 (23136) (0)
PRIN 773 (7019) (-1)
Home मुख्य खबर जीवन बीमा कम्पनी : २१% ले बढ्यो बीमाशुल्क
जीवन बीमा कम्पनी : २१% ले बढ्यो बीमाशुल्क
नियोगका कर्मचारीको उपचार खर्च बेरुजू -
बीमाक्षेत्रको दिगोपनका लागि तालीम केन्द्र -
बीमाशुल्क र दाबी भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीबाट -
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को माघ महीनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमाशुल्क आर्जन २० दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समितिले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । पुस महीनामा त्यस्तो वृद्धिदर १७ दशमलव ७९ प्रतिशत थियो, जुन मङ्सिरको तुलनामा करिब ८ प्रतिशत विन्दु कम हो । पुसमा खुम्चिएको बीमाशुल्क वृद्धिदर माघमा भने बढ्न सफल भएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको १८ जिवन बीमा कम्पनीहरुले माघसम्म रू. २४ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । उक्त रकम वैदेशिक रोजगारलगायत जीवन बीमालेखबाट प्राप्त भएको हो । वैदेशिक रोजगार बीमाबाट रू. १ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख र अन्य जीवन बीमाबाट रू. २२ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रकम प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बीमाको पहुँच र साक्षरता विकास भएसँगै बीमाशुल्क आर्जन पनि बढेको समितिले बताएको छ । समितिले नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरू थपिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको हुनाले बीमाक्षेत्रको विकास हुँदै गएको जानकारी दिएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप हौसला मिलेको समितिको भनाइ छ ।
यस्तै, माघ महीनामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी रू. ८ अर्ब ३४ करोड १३ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । सबैभन्दा कम सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले रू.२७ लाख ८५ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मानिसलाई भविष्यमा हुने कुनै भवितव्य घटनामा पैसाको अभावले समस्या नआओस् भनेर व्यक्तिगत रूपमा जीवन बीमा गर्ने गरिन्छ । करार गर्दाको सम्झौताअनुसार बीमितले किस्ताबन्दीमा कुनै खास रकम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यदि तोकिएको समय अवधिभित्र निजको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले बीमाङ्क र बोनस रकम पाउनेछ । यदि तोकिएको अवधिभित्र निजको मृत्यु भएन भने स्वयम् बीमितले नै उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ । अहिले नेपालमा १८ जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस्तो सेवा दिँदै आएका छन् ।